Ebighi-ebi nwoke Mary – 2azụ
Home / Church / Mary / Ebighi-ebi nwoke Mary
Gịnị mere Katọlik kweere Mary nọgidere a na-amaghị nwoke, mgbe Bible na-ekwu Jesus ama ụmụnna?
Na, gịnị mere na Meri amaghị nwoke nnọọ mkpa iji Katọlik?
Abụghị di ma ọ bụ: Katọlik kweere Mary nọgidere a na-amaghị nwoke nile dị ndụ n'ihi na ọ bụ ezi. Ọ bụ ozizi solemnly kwusara site na Kraịst Church, “ogidi na ntọala nke eziokwu” (ịhụ Pọl Akpa Letter Timoti 3:15); mata ya Dị Nsọ Tradition; na na agreeance na Akwụkwọ Nsọ (ịhụ Pọl Nke abụọ Letter ndị Tesalonaịka 2:15).
Ya mere, Katọlik kweere na “ụmụnna nke Jehova” kwuru okwu ya na Bible bụ na nso-mmekọahụ nke Jesus, ma ọ bụghị ụmụnne (dị ka anyị ga-akọwa na n'uju ya n'okpuru).
Egbu, na kasị budata, Meri ebighi-ebi Amagh i nwoke dị mkpa na ihe Christianity n'ihi ihe ọ na-emesi banyere Jizọs. Mee elu mee ala, nkwenkwe a ezo na ịdị nsọ nke Kraịst na ịpụ iche nke incarnation: omume nke Chineke na-aghọ nwoke.
Ezikiel onye amụma kwuru, nke onye-isi “ga na-aga, na mgbe ọ na-arahụ si n'ọnụ ụzọ ámá a ga-emechi emechi” (ịhụ Ezekiel 46:12), na Church na-aghọta nke a na-e kwuru na ọmụmụ Kraịst na Meri na-adịru ogologo ndụ nile amaghị nwoke (-ahụ Saint Ambrose, Nmeju-aka nke a Virgin 8:52). Ya mere, O kwesịrị ekwesị na Mary ga-ejigide-amaghị nwoke mgbe a mụrụ Jizọs n'ihi onye ọ bụ: Chineke n'ụdị mmadụ!
Akwụkwọ Nsọ, otu nwere ike tụgharịa uche akụkọ nke Moses na ndi-ere Ọkụ. Dị ka Moses bịakwutere ohia, Jehova we, “Adịghị abịa nso; -etinye akpụkpọ ụkwụ gị n'ụkwụ gị, n'ihi na ebe nke i nēguzo bu ala nsọ” (Exodus 3:5).
Nke a akụkọ enyere anyị aka ịghọta Meri ebighi-ebi Amagh i nwoke na ụzọ abụọ.
Mbụ, anyị na-ahụ n'ala e doro nsọ n'ihi na ọnụnọ nke Onyenwe anyị rịdata n'ebe. Anyị ekwesịghị ichefu na nke a otu Chineke, onye pụtara ìhè n'ihu Moses na-ere Ọkụ, e tụụrụ ime ya n'akpa nwa nke Mary.
Ya mere, ọ ga-na a ga-efe Chineke kwesịrị ekwesị na-ekwu na ọ, dị ka na ala nsọ na Exodus, kwesịrị ka e doo, akpan kwadebere, nke ahụ bụ, -enweta ndị na Eze nke ndị eze na Onyenwenụ nke ndị nwenụ.
Nke abụọ, Ndị Nna Chọọchị hụrụ onyinyo nke Na-ere Ọkụ onwe ya–a ohia agbakwa, ma ọ bụghị iwesa–mee ihe atụ nke Meri mụpụta nwa na-enweghị a tụfuo-amaghị nwoke. Ọmụmaatụ, na narị afọ nke anọ, Gregory of Nyssa dere, “Ihe e sere onyinyo n'oge ahụ na ire ọkụ nke ohia emere ka gosi na ihe-omimi nke Virgin. … Dị ka n'elu ugwu osisi ntà ahu nēre ma e iwesa, otú ahụ ka Virgin mụrụ ìhè na-adịghị emerụ” (Na Ọmụmụ nke Kraịst).
N'ụzọ bụ, Meri ebighi-ebi Amagh i nwoke na-ekwuwàpụta ka ụwa na n'ihi Christ dị nsọ,–Chineke n'onwe Ya–ọ gaara na-ekwesịghị ekwesị ime ya na e guzobere ya n'akpa nwa nke nkịtị nwaanyị; na, otú ahu, ka ndị mmehie nwere si na otu akpa nwa mgbe Ya–akpa nwa akpan kwadebere iburu Messiah. Ọzọ, tụlee Ezekiel, “[onye-isi] ga na-aga, na mgbe ọ na-arahụ si n'ọnụ ụzọ ámá a ga-emechi emechi.”
Mary amaghị nwoke na oge nke Jehova mụrụ Baịbụl gosiri na amụma bụ Aịzaịa, bụ onye sịrị, “Le, a na-amaghị nwoke ga-atụrụ ime na ibu nwa-, na gakpo kwa aha ya Immanuel” (7:14; ịhụ Matiu 1:23 na Luke 1:27). Isaiah, ka emechara, -emesi-amaghị nwoke na ọ tụụrụ ime na na-amịpụta. Ọzọkwa. Mary si meghachi, ka Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi si mara ọkwa na ọ ga-atụrụ ime na ibu Ọkpara–“Olee otú a pụrụ ebe ọ bụ na m amaghị nwoke?” (Luke 1:34)–n'ụzọ doro anya na-egosi na ọ bụ a na-amaghị nwoke. O mere o siri ike-eme ka uche n'ụzọ ndị ọzọ.
Ya ruo mgbe niile virginal ala pụtara ìhè Abụ nke Solomon, nke na-ekwu, “A ubi ekpochi bụ nwanne m nwaanyị, m alụ ọhụrụ, Isi-iyi kaa akara” (4:12).
Olee otú anyị aka ịghọta nke a O bu na o na Joseph e betrothed na mechara lụọ? E nwere bụ omenala ochie nke na-ekwu na Mary raara nye Jehova dị ka a raara na-amaghị nwoke site na nwa ọhụrụ; na nke na mgbe ọ bịara nke afọ ahụ e nyere na Joseph, Mgbe nwunye ya nwụrụ ọtụtụ ihe tọrọ ọ (CF. Protoevangelium nke James).
Echiche nke ịdị ọcha n'ime alụmdi na nwunye n'okpuru ụfọdụ ọnọdụ bụ, n'ezie, a echiche Bible. Ọmụmaatụ, Ndị Mbụ Book of Eze 1:4, Eze Devid na-ewe a nwa agbọghọ, Abishag, -ya na nwunye na-elekọta ya n'oge agadi ya, ma abstains si ebuana ye enye.
Ọzọkwa, N'akwụkwọ ozi mbụ ndị Kọrint akwụkwọ, Pọl tụrụ aro a kwuo nke edoro nsọ alughi di ma ọ bụ ebighi-ebi betrothal ndị nwere ike ịnabata ya (ịhụ 7:37-38).
O doro anya na, na ìhè nke ya akpọ ibu Ọkpara Chineke, Meri lụọ Josef ahu di anya n'ebe ndị nkịtị. Ọ na-e Chineke hiwere maka elekọta ma na-echebe ndị Virgin na nwa ya nwoke–na-incarnation zoro ezo n'ụwa n'ihi na a oge. “The amaghị nwoke nke Mary, ya na-amụ, na kwa ọnwụ Onyenwe, e zoro ezo isi uwa nka,” dere, sị Ignatius nke Antiọk, a na-eso ụzọ Onyeozi John, na ihe dị ka n'afọ 107: “–atọ omimi àmà siri kwusara, ma zọputa na idere duu nke Chineke” (Letter ndị Efesọs 19:1).
na Matiu 1:19, Akwụkwọ Nsọ na-agwa anyị Jospeh bụ “a dị nnọọ mmadụ.” N'ihi ya, nuru Mary turu ime ka nwatakịrị ọzọ, o kpebiri na irapu ya na-eji nwayọọ na-azọpụtaghị ha puru omume egbu n'okpuru Iwu Mozis (dị ka kwa Deuteronomy 22:23-24).
Jehova na-etinye aka, ezie na, -agwa ya n'ọnụ mmụọ ozi na nrọ, “Ha adịghị atụ egwu ịkpọrọ Meri nwunye gị, n'ihi na nke a na ime Ya nke Mmụọ Nsọ; ọ ga-amị a nwa, na ị ga-akpọkwa aha ya Jizọs, n'ihi na ọ ga-azọpụta ndị ya na mmehie nile ha” (Matiu 1:20).
Joseph agaghị emeela okwu ndị a pụtara, ezie na, na Meri bụ ịbụ nwunye ya na ndị nkịtị uche nke okwu. Dị ka Saint Ambrose nke Milan dere,
“O kwesịghị ihe ọ bụ na Akwụkwọ Nsọ kwuru: 'Josef we chiri nwunye-ya ba Egypt’ (Matt. 1:24; 2:14); n'ihi na nwaanyị ọ bụla espoused ka mmadụ na-nyere aha nwunye. Ọ bụ site na mgbe a alụmdi na nwunye na-amalite na alụmdi na nwunye ala na-arụrụ ọrụ. Ọ bụghị deflowering maghị nwoke na-eme ka a alụmdi na nwunye, ma ọ bụ nwunye nsuko. Ọ bụ mgbe ahụ girl na-anabata ndị yoke na alụmdi na nwunye malitere, ọ bụghị mgbe ọ na-abịa mara di ya ikpọkidem” (The nmeju-aka nke a Virgin na ebighi-ebi nwoke Mary 6:41).
Na ọ mụụrụ Ọkpara Chineke mere ya mbụ na nwunye nke Mmụọ Nsọ (kwa Luke 1:35); na Joseph e machibidoro iwu n'okpuru Iwu na-enwe mmekọrịta alụmdi na nwunye ya na nwunye onye ọzọ.
Gịnị banyere “ụmụnna nke Jehova?”
Mbụ, ọ ga-kwuru na e nwere ihe ize ndụ na-ehota amaokwu Akwụkwọ Nsọ si na onodu nke dum nke Akwụkwọ Nsọ. Eziokwu ahụ bụ na Jizọs nyere Mary nakwa onye ozi Jon, ọmụmaatụ, na-a siri ike na-egosi O nwere n'ezie ụmụnne (ịhụ John 19:27). N'ihi na ọ bụrụ na Mary mụrụ ụmụ ndị ọzọ, Jizọs agaghị nwere ịjụ onye na-abụghị nke ezinụlọ ya na-elekọta. (Utọk megide a inweta ụfọdụ traction na Evangelical okirikiri bụ echiche ahụ bụ na Jizọs nyefere Meri n'aka John n'ihi na James na Jehova ọzọ “umu-nne-” aghọbeghị Ndị Kraịst. Ma nke a esemokwu bụ tenuous. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, otu ga-atụ anya Oziọma na-enye ụfọdụ nkọwa otú a. Eziokwu ahụ bụ na Jizọs na-enye Mary ka John enweghị nkọwa na-egosi Mary ama ụmụaka ndị ọzọ.)
Kedu, mgbe ahụ, ka anyị ga-akọwa amaokwu ndị dị otú ahụ dị ka Matiu 13:55, bụ nke ndị mmadụ n'ime ìgwè mmadụ ahụ ikwu,, “Nke a ọ bụghị nwa ọkwá nkà ahụ? -Adịghị Mary maara na-nne-ya, na Jemes, Joseph, Saịmọn na Judas ụmụnne ya? -Adịghị ụmụnne ya ndị nwanyị ndị agbata obi anyị?”
The Catholic ọnọdụ na ndị a “ụmụnna” na “ndị nwanyị” nọ nso ndị ikwu, dị ka nwanne mama, ma ọ bụghị ụmụnne, kwekọrọ na ndị Juu oge ochie omenala nke na-akpọ onye ikwu “nwa-nne-” (kwa Jenesis 13:8; 14:14; 29:15, et al.). Dị ka Pope John Paul Ukwu dere, “Ọ ga-eti na ọ dịghị ihe okwu dị Hibru na Aramaic na-egosipụta okwu 'nwa nwanne nna', na na okwu ahụ 'nwanne’ na 'nwanne’ Ya mere gụnyere ọtụtụ degrees nke mmekọrịta.”1
Ọzọkwa, ọ na-ọzọ kpughere Matiu na “Jems na Josef” n'ezie umu a dị iche iche Mary, onye guzoro na ndị fọdụrụ n'ime ndị inyom na ụkwụ nke ndị Cross na-eso Mary Magdalene aka udi na Ista n'ụtụtụ (27:55-56; 28:1).
Nke a ọzọ Mary e kweere na ya bụ nwunye Clopas, Ekeme ndidi otu nwanne nna nke Jesus (ịhụ John 19:25; lee kwa Eusebius, History of the Church 3:11).2 Ọ na-agwa, Ọzọkwa, na Jehova na- “umu-nne-” na-enweghị ebe nime Akwukwo kwuru na dị ka ụmụ ndị ikom Mary, dị ka Jizọs mgbe a na-akpọ (ịhụ Matiu 13:55; Mark 6:3, et al.).
E nwere ihe abụọ ọzọ Gospel amaokwu nke na ndị iro nke Meri ebighi-ebi Amagh i nwoke mgbe nyekwa: Matiu 1:25 na Luke 2:7.
Matiu 1:25 na-ekwu na Joseph “enweghị ebuana ye enye n'oge ọ bụla tupu ya amụta nwa nwoke.” Dị ka Ludwig Ott kọwara na Fundamentals nke Catholic Dogma, ezie na, amaokwu a “-ekwu(s) na ruo a anya mgbe oge na-alụmdi na nwunye na-consummated, ma ọ bụghị ma ọlị na a consummated mgbe a” (tan Books, 1960, p. 207). Ihe mgbaru ọsọ nke Matiu 1:25 bụ kwusie na Jisọs enweghị n'ụwa nna, na bụ n'ezie Ọkpara Chineke. Ọ e keghị-atụ aro ihe ọ bụla banyere Josef na Meri na mmekọrịta mgbe Jesus’ nwa. Tụlee Nke abụọ Book of Samuel 6:23, bụ nke kwuru na Mary “enweghị nwa rue ubọchi ọnwu-ya.” O doro anya na, nke a apụtaghị na o nwere a nwa mgbe ọnwụ ya. na Matiu 28:20, Jesus ekwe nkwa ịnọnyere ụmụazụ Ya “ruo ná ngwụsị afọ.” Ọzọ, nke a apụtaghị Ọ ga-akwụsị na ha n'ofè ahụ.
na Luke 2:7, Jesus na-akpọ Meri “ụzọ mụọ.” Otú ọ dị, dị ka Pope John Paul kọwara:
“Okwu ahụ 'ọkpara,’ pụtara n'ụzọ nkịtị 'a nwa-adịghị kpọkwasịwo ọzọ’ na, n'onwe ya, -eme ka mba banyere ịdị adị nke ụmụaka ndị ọzọ. Ọzọkwa, na ọkwọrọikọ-emesi a ji mara ndị na Child, ebe ọ bụ na ibu ọrụ ụfọdụ kwesịrị ekwesị ka iwu ndị Juu e jikọrọ ya na ọmụmụ nke ọkpara, onwe ha nke ma ndị nne nwere ike nyere nwa ụmụ ndị ọzọ. N'ihi ya ọ bụla naanị nwa-ya n'okpuru ndị a prescriptions n'ihi na ọ bụ 'amuwo mbụ’ (CF. Luke 2:23)” (“The Church Presents Mary dị ka 'Ever Virgin'”)
Michael O'Carroll, Ọzọkwa, kọrọ, “The Jewish ili ozu e dere na Egypt, dịwara malite na narị afọ mbụ, … -enyere aza ihe mgbochi bụ megide Meri ebighi-ebi amaghị nwoke dabeere na St. Luk jiri okwu ahụ 'ụzọ mụọ’ (prototokos) (2:7). Na okwu na-enye echiche na ụmụaka ndị ọzọ na-apụta ìhè ojiji na nke a na-akọwa otu nwanyị nwụrụ mgbe a mụsịrị nwa mbụ ya, na-enweghị ike doro anya na-ama ndị ọzọ” (Theotokos: A Theological Encyclopedia of agọzi Virgin Mary, Michael Glazier, 1982, p. 49).
Gịnị Mere Ndị Nna Chọọchị Kwuo?
Ebe ọ bụ na abụọ na ọ bụ arụmụka banyere Meri ebighi-ebi Amagh i nwoke, pro na na, eme ka Akwụkwọ Nsọ arụmụka na-akwado ọnọdụ ha, otú anyị na-ekpebi onye ziri ezi? Onye na-akọwa Akwụkwọ Nsọ n'ụzọ ziri ezi, na n'ezie ndịozi ụzọ?
Otu ụzọ isi na-enye nkwado bụ ịmata ihe Onye Kraịst n'oge ochie akụkọ ihe mere eme dere, akpọkarị ihe odide ndị Early Church Fathers.
Clement nke Alexandria, dị ka ọmụmaatụ, ná mmalite nke narị afọ nke atọ dere, sị, “Nke a na mama ọ bụ nanị enweghị mmiri ara, n'ihi na ọ bụ naanị aghọghị nwunye. Ọ bụ ozugbo ma Virgin na mama m” (The Ozizi nke Children 1:6:42:1).
Clement si nwa akwụkwọ, isi iyi, ke akpa afọ iri nke na narị afọ, gosikwara na Mary “enweghị ndị ọzọ na nwa ma Jesus” (Akwụkwọ na-akọwa John 1:6). N'ebe ọzọ, o dere,, “Na m chere na ọ kwekọrọ mere na Jizọs bụ na nkpuru mbu n'etiti ndị na-adị ọcha nke ndị mejupụtara ọ gharakwa ịdị ọcha, na Mary bụ n'etiti ndị inyom; n'ihi na ọ bụghị nsọ nsọ ka Nyenụ ọ bụla ọzọ karịa ya na nkpuru mbu nke amaghị nwoke” (Akwụkwọ na-akọwa Matthew 2:17).
Na ndị ya na-emezu oké otuto maka ya, Athanasius (d. 373) kọwara Mary ka “Mgbe-Virgin” (Okwu Megide Arians 2:70).
na banyere 375, Epiphanius rụrụ ụka, “Bụ dị mgbe onye ọ bụla nke ọ bụla ozuzu na-anwa anwa ịgwa aha Holy Mary, na a na-agbagha, adịghị ozugbo tinye, 'Virgin?'” (Panarion 78:6).
“N'ezie,” dere, sị Pope Siricius na 392, “anyị ghara ghara na Your INYE Chineke oké nsọpụrụ bụ n'ụzọ zuru okè ezi ịbara ya mba na akara nke Mary ụmụ, nakwa na ị nwere ezi ihe mere a ga-Amagh bụ icheta na ọzọ ọmụmụ pụrụ inye si na otu virginal akpa nwa nke amuru Kriast dika anu-aru” (Letter na-Anysius, Bishop nke Thessalonica).
Ambrose kwuru na 396, “iṅomi ya, nsọ nne na, onye ya naanị hụrụ n'anya nke ukwuu Ọkpara weputara oké ihe atụ nke ihe onwunwe omume; n'ihi na ọ dighi kwa unu dịkwa ụtọ ụmụ, ma ọ bụ otú ndị Virgin achọ nkasi-obi nke inwe ike iburu nwa nwoke ọzọ” (akwụkwọ ozi 63:111).
Augustine nke Hippo (d. 430) kwuru,, “A Virgin atụrụ ime, a Virgin amị, a Virgin ime, a Virgin-akọrọ, a Virgin ebighi-ebi. Gịnị mere i ji na-eche na nke a, O nwoke? O kwesịrị ekwesị n'ihi na Chineke ga-amụ otú, mgbe O deigned ma ghọọ mmadụ” (okwuchukwu 186:1).
Pope Leo Ukwu kwuru na 449, “Ọ we turu ime nke Mmụọ Nsọ n'ime akpa nwa nke Ya Virgin na mama. Ọ kpọpụta ya na-enweghị ọnwụ nke amaghị nwoke, ọbụna dị ka o we turu ime Ya na-enweghị ya ọnwụ” (Tomé 28). N'ebe ọzọ na pontiff dere, “N'ihi na a Virgin tụụrụ ime, a Virgin mụụrụ, na a Virgin ọ nọgidere” (Ozizi Elu Oriri nke Ọmụmụ Kraịst 22:2).
N'ihi ya, ka anyị na-ahụ otu ihe mere eme na continuity nke ozizi a si mmalite afọ nke okwukwe ruo taa.
Lee “The Church Presents Mary dị ka 'Ever Virgin;'” L'Osservatore Romano, Weekly Edition na English, September 4, 1996. ↩
“Utọk megide a, ezie na,” kwuru, Karl Keating, “bụ na James bụ n'ebe ọzọ (Mt 10:3) kọwara dị ka nwa Alfiọs, nke ga-apụta na Mary, onye ọ bụla nke ọ bụ, bụ nwunye ma Cleophas na Alfiọs. One ngwọta bụ na ọ na di ya nwụrụ ozugbo, mgbe ahụ eka. More eleghị anya Alfiọs na Cleophas (Clopas na Greek) bụ otu onye, ebe ọ bụ na Aramaic aha maka Alfiọs nwere ike ịbụ na Greek ụzọ dị iche iche, ma dị ka Alfiọs ma ọ bụ Clopas. Ọzọ pụrụ ịpụta na Alfiọs were a Greek aha yiri ya Juu aha, n'ụzọ Sọl wee aha Paul” (Katọlik na Fundamentalism, Ignatius Press, 1988, p. 288). ↩